Gbasara anyị - Hebei TUBO Machinery Co., Ltd.
Hebei TUBO Machinery Co., Ltd. na-ere ọkụ ERW tube Mill / Pipe Mill, LSAW (JCO) Pipe Mill, Oyi Roll akpụ Machine na Slitting Line, yana ihe inyeaka maka ihe karịrị Afọ 15, anyị mepụtara ma tolite na usoro na-agbanwe agbanwe oge niile achọrọ ahịa.
Na morden imewe software na ihe karịrị 130 na - ewepụta ụdị akụrụngwa CNC niile, TUBO Machinery ka na-etolite ma na-eme ka ọ mata etu esi arụ ọrụ n'ọhịa n'oge.
TUBO masters ụwa kacha ọhụrụ ala Common Technology, FF akpụ, FFX akpụ, Kpọmkwem akpụ na Square, wdg.Mgbe nụchara ngụkọta maka nha na npụta nke arịrịọ onye na-azụ ahịa, anyị nwere ike ịmepụta igwe ọkpọkọ / ọkpọkọ nke na-azọpụta ego zuru oke na nke kachasị.
TUBO Machinery meriri otutu ulo na nke esenidụt emeputa nke welded ọkpọkọ mills, oyi mpịakọta akpụ igwe na slitting edoghi na aha ọma na mma. E zigara igwe anyị Chile, Colombia, Mexico, Ecuador, Russia, Albania, Turkey, Iraq, Iran, Cyprus, Syria, Uganda, Angola, Ethiopia, Vietnam, Cambodia, Russia, Kazakhstan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Tajikistan wdg.
Ngwa TUBO abụghị naanị imepụta igwe dị elu dị elu, kamakwa ọ na-enye ọrụ aka ọrụ ọkachamara na azụmaahịa ahịa. Ka ọ dị ugbu a, ọnụọgụ ngwaahịa nwere ike soro ihe ndị chọrọ yana arịrịọ nke ndị ọrụ.
TUBO Machinery, dị ka ndị mmekọ nke ndị ọrụ, na-enye ebe niile na oge ọ bụla ọrụ injinia dị elu na nkwado teknụzụ, ozi, echiche na ọrụ kacha mma. Ọganiihu nke ndị ọrụ ya na-eweta ihe ịga nke ọma nke TUBO Machinery.
Ngwa TUBO - Mepụta Uru maka Ndị Ọrụ!
South America Western Europe Eastern Asia Middle East Africa Oceania
Emeputa Trading Company
Echeta: Ogologo oge
Mba nke ndị ọrụ: 236
Ahịa Ahịa: > Nde 25
Afọ guzosiri ike: 1997
Mbupụ pc: <10%
1. Ọrụ ere tupu ere
Ndị injinia TUBO igwe na-enyocha ihe onye ọrụ chọrọ nke ọma, iji hụ na ihe niile achọrọ nwere ike mezuo.
2. Ntinye na inye ọrụ
Turn-isi nwụnye na nyere nke zuru tube igwe, slitting edoghi, mpịakọta akpụ igwe;
Nlekọta nke nwụnye na inye ọrụ;
Ọzụzụ maka ndị ọkachamara 'ndị ọrụ / ndị ọrụ n'oge ọrụ;
Ogologo oge na-arụ ọrụ nke igwe nri, ọ bụrụ na achọrọ ya;
3. Mgbe ire ere
Ngwaọrụ TUBO nwere ike ịnye ndị ahịa otu ụdị zuru oke ahịa. Mgbe echichi na inye ọrụ, a ga-enye ndị na-arụ ọrụ na ndị ọrụ mmezi ọzụzụ ọrụ aka. Mgbe-ire ọrụ ẹkesikpede ga na-a zuru ezu ndekọ nke ahịa ọmụma na akụrụngwa ọnọdụ maka ndị ahịa, na-eme ka oge ufodu update na mechiri emechi-akaghị nsuso. N'ihe banyere ajụjụ ọ bụla, injinia mmezi anyị ga-aza nzaghachi ekwentị gị na elekere elekere anya, jiri ndidi na nlezianya nye azịza nke teknụzụ, ma nye ndị ọrụ ma ọ bụ ndị ọrụ mmezi ntuziaka.
4. Mgbasa Nkwado
Ndị injinia nwere nkà na ahụmịhe nke igwe TUBO dị njikere ịnagide ụdị mmebi ọ bụla.
Ngwa ngwa ngwa enyemaka na ndụmọdụ site na ekwentị na / ma ọ bụ e-mail;
Ọrụ teknụzụ rụrụ na saịtị ndị ahịa, ọ bụrụ na ọ dị mkpa;
Ngwa ngwa nke n'ibu na electronic components;
5. Refurbishment na nweta nkwalite
MACLỌ TUBO nwere ahụmịhe zuru oke na nwelite, na-emezigharị ma ọ bụ na-emelite igwe ihe ochie. Usoro nchịkwa nwere ike ịbụ ụbọchị yana enweghị ntụkwasị obi mgbe ogologo afọ gasịchara. Anyị nwere ike ịnye ọhụụ na PC, PLC na CNC dabere na nhọrọ njikwa. Usoro na usoro metụtara ya nwekwara ike irite uru site na nwughari ma ọ bụ dochie anya, na-enye onye ọrụ ahụ ezigbo mma ngwaahịa yana ọrụ a pụrụ ịdabere na ya site na igwe ha.
Anyị, Hebei TUBO Machinery Co., Ltd., rụpụta na mbupụ welded tube / anwụrụ na nkume igwe nri, oyi mpịakọta akpụ igwe na slitting akara, nakwa dị ka inyeaka equipments ihe karịrị afọ 16, anyị mepụtara na-eto na akara na mgbe niile evolving ahịa chọrọ .
Na ihe karịrị 130 esetịpụrụ niile ụdị CNC machining equipments, n'elu 200 ọrụ, odika. 45,000 square mita nke ala, TUBO Machinery na-aga n'ihu na-emepe ma na-ewusiwanye etu esi mara ya n'ọhịa n'oge. Na-agbanwe ma na-erube isi na arịrịọ ndị ahịa ya, ụlọ ọrụ ahụ weere na ndị ahịa ya nwere ihe ùgwù kwesịrị ntụkwasị obi na ezigbo ndị mmekọ.
Ngwaahịa anyị agafeela ọtụtụ asambodo.
Ele More Banyere Anyị